WTN Waxay Leedahay Su'aalo Badbaado Cusub oo loogu talagalay Suuqa Socdaalka Adduunka London
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Shirarka » WTN Waxay Leedahay Su'aalo Badbaado Cusub oo loogu talagalay Suuqa Socdaalka Adduunka London
Wararka Ururada • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Investments • LGBTQ • Shirka Warka Warshadaha • Shirarka • News • Dadka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka UK • Wtn
Waxaa jiri doona Suuqa Safarka Adduunka ee jireed iyo WTM-ga casriga ah. Maanta, Shabakadda Dalxiiska Adduunka waxa ay la gaartay WTM laba su'aalood oo degdeg ah iyo rafcaan ah in qaybta jireed ee Suuqa Socdaalka Adduunka laga dhigo mid ammaan ah.
COVID-19 iyo mid cusub AY.4.2-hoosaadka ayaa la wareegaya cinwaannada wararka ee Boqortooyada Ingiriiska, laba toddobaad ka hor Suuqa Safarka Adduunka ee London.
The Shabakada Dalxiiska Adduunka maanta soo saaray racfaan degdeg ah iyo su’aal muhiim ah Bandhigyada cawsduur, qabanqaabiyaha ee Suuqa Safarka Adduunka.
Xirfadlayaasha dalxiiska ee adduunka oo dhan ayaa la filayaa inay ku kulmaan Xarunta Bandhigga Excel Noofambar 1-3.
Ilaa intee buu nabdoon yahay Suuqa Socdaalka Adduunka ee London?
Suuqa Socdaalka Adduunka ayaa diyaar u ah inuu u soo bandhigo caalamka in bandhigyada ganacsi ay suurtagal tahay, dalxiiska ayaa si caadi ah ku soo laabanaya, waxaana la filayaa in maalgelinta dalxiiska ay qeybtan ku soo hagaagto.
London iyo meelo kale oo Boqortooyada Midowday ah, baararka iyo makhaayadaha, iyo sidoo kale goobaha dhacdooyinka waa furan yihiin. Xirashada maaskaro looma baahna marka laga reebo gaadiidka dadweynaha. Qiimaha hoteelku waa kii ugu sarreeyay, booqdayaashuna way soo noqonayaan.
Isla waqtigaas, Boqortooyada Ingiriiska ayaa diiwaangelisay 49,139 kiis oo cusub oo COVID-19 ah iyo 179 dhimasho. Sida laga soo xigtay arku soo biir CNBCDhakhaatiirta UK waxay ku baaqayaan in xayiraad lagu soo celiyo England. Nooc cusub oo fayraska ah oo UK ay hadda aragtay ayaa xitaa aad u faafa.
Dunida dalxiiska caalamiga ah ma sugi karaan inay la kulmaan oo ay ku gacan qaadaan asxaabtii hore WTM-ka soo socda. Daabacaadani waa bahwadaag warbaahineed oo ka tirsan Suuqa Socdaalka Adduunka oo Daabacaha, Juergen Steinmetz, wuxuu xirxirayaa boorsadiisii.
Sacuudi Carabiya kaliya toddobaadkan ayaa xaqiijisay iskaashigeeda inay tahay kafaala -qaadaha ugu weyn Suuqa Safarka Adduunka oo ka dhacaya Xarunta Bandhigga Excel ee London laga bilaabo Noofambar 1-3 bisha soo socota.
Ajandaha 3-maalmood ee WTM waxaa ka buuxa dhacdooyin iyo shirar. WTM 2021 waa bandhiggii ugu horreeyay ee run ahaantii ugu weynaa ee socdaal caalami ah tan iyo markii uu dillaacay COVID-19 iyo baajinta naxdinta leh ee ITB Berlin sannadka 2020.
Joojinta Suuqa Socdaalka Adduunka ee London daqiiqaddii ugu dambeysay hadda waxay u badan tahay inay ku abuurto niyad -jab iyo naxdin adduunka oo dhan. Waa muhiim in WTM ay u dhacdo soo kabashada aadka loogu baahan yahay qaybta.
Maanta, Madaxa Shabakadda Dalxiiska Adduunka, ahna khabiir ku takhasusay amniga socdaalka, Dr. Peter Tarlow, ayaa soo jeediyay laba su'aalood oo muhiim ah iyo walaac. Dr. Tarlow waxa kale oo uu noqon doonaa ku-hadlaaha qaybta casriga ah ee Suuqa Socdaalka Adduunka.
Waa kuwan waxa booqdayaashu ka heli karaan websaydhka WTM ee la xiriira amniga iyo amniga inta lagu jiro dhacdada.
Tallaabooyinka amniga ee ka -qaybgalka Suuqa Socdaalka Adduunka
WTM waxay ku leedahay boggeeda internetka: Badbaadadaada iyo ganacsigaagu waa mudnaantayada. WTM London, waxaad ku kalsoonaan kartaa inay labaduba ku jiraan gacmo badbaado leh. Sidoo kale si taxadar leh u raacda talooyinka iyo tilmaamaha ugu dambeeyay, waxaan la shaqeyneynaa maamulada maxalliga ah iyo taxaddarradayada adag si aan u dejino tillaabooyin cusub si aan kuu gaarsiinno dhacdo badbaado leh oo aad la kulanto, wax ku barato, oo ganacsi sameyso.
Tan micnaheedu waa dhacdadayadu waxay u ekaan doontaa wax yar oo ka duwan sannadkan, laakiin isbeddeladani waxay kuu oggolaan doonaan inaad ku raaxaysato waayo -aragnimada adiga oo naftaada ilaalinaya, iyo kuwa kaleba, ammaan ah.
Dhammaan ka-qaybgalayaashu waxay u baahan doonaan inay muujiyaan caddaynta xaaladda COVID-19 si ay u galaan dhacdadayada. Markaad timaado waxaad u baahan doontaa inaad soo bandhigto qoraal, iimayl, ama baas si aad u xaqiijiso xaaladaada COVID inay tahay mid ka mid ah kuwan soo socda:
Caddaynta dhammaystirka koorsada tallaalka oo dhammaystiran 2 toddobaad ka hor imaanshaha.
Caddeynta Tijaabada Socodka dambe ee taban ama natiijada PCR ee la qaatay 48 saacadood gudahood ka dib imaanshaha.
Caddaynta xasaanadda dabiiciga ah ee lagu muujiyey natiijada baaritaanka PCR ee wanaagsan ee COVID-19, oo soconaysa 180 maalmood laga bilaabo taariikhda baaritaanka togan iyo ka dib dhammaystirka muddada go'doominta.
Ka qaybgalayaasha waxaa sidoo kale la waydiin doonaa inay maalin kasta iska xaadiriyaan goobta NHS Test & Trace QR code. Fadlan ogow in xariijimaha baaritaanka socodka dambe ee jirka ama kaadhadhka tallaalka jirka midna looma aqbali doono caddaynta heerka saxda ah. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan kaadhka COVID, riix halkan.
Reed Expo, qabanqaabiyaha Suuqa Safarka Adduunka, WTM, ayaa u sheegaya booqdayaasha:
WTM: Waxaan si xoog leh kugula talineynaa inaad xirto maaskaro wejiga marka aad ku jirto meelaha bannaan ee gudaha ah adiga iyo shaqsiyaad aadan caadiyan ku dhex milmin.
"Suuqa Safarka Adduunka oo ah hormuudka bandhigga ganacsiga safarka caalamiga ah ayaa dejinaya isbeddellada ma aha oo kaliya munaasabaddeeda laakiin adduunka. U oggolaanshaha ka qaybgalayaasha inay ka qaybqaataan maaskaro la'aan kaliya maaha walaac badbaado oo WTM ah, laakiin waxay diri doontaa farriin khaldan inta lagu jiro waqtiyadan aan weli la hubin," ayuu yiri Juergen Steinmetz, Guddoomiyaha Shabakadda Dalxiiska Adduunka.
WTN: The Shabakada Dalxiiska Adduunka waxay ku boorinaysaa Reed inay talaabo dheeraad ah qaado si waji-xidhka waji looga dhigo waajib dhacdada. Tani waa nidaamka caadiga ah inta badan dhacdooyinka gudaha ee adduunka oo dhan. Waxay noqon doontaa mas'uul darro in WTM ay u ogolaato kaqeybgalayaasheeda inay doortaan iyaga u gaar ah inay xirtaan maaskaro.
WTN ayaa si cad u sii caddaynaysa marka ay soo jeedinayso in dhammaan booqdayaasha la tallaalo. Tani waxay shardi u tahay IMEX America soo socota ee Las Vegas, Noofambar 9-11.
Reed Expo, qabanqaabiyaha Suuqa Safarka Adduunka, WTM, wuxuu xaqiijinayaa booqdayaasha:
WTM: Hawo -qaadista Xarunta Bandhigga EXCEL waa la kordhin doonaa, iyadoo hagaajinaysa wareegga hawada cusub si waafaqsan tilmaamaha ugu dambeeyay.
WTN: Shabakadda Dalxiiska Adduunka waxay ku boorinaysaa Xarunta Bandhigga EXCEL inay samayso daraasad degdeg ah, oo ay la wadaagto natiijooyinka sida waxtarka leh ee nidaamka hawadu uga soo horjeedo dhammaan noocyada COVID-19 oo ay ku jiraan kuwa ugu dambeeyay iyo kuwa hadda la ogaaday. AY.4.2 nooc-hoosaad.
Cudurkaan coronavirus-ka ah ee kala duwanaanshaha Delta ayaa hadda si xawli ah ugu fidaya Boqortooyada Ingiriiska waxaana lagu qiimeeyaa inuu yahay 10-15 boqolkiiba infekshan ka badan “waalidkiis” oo hadda xukuma caabuqyada Covid-19 adduunka oo dhan.
Saynis yahanadu waxay daraaseynayaan AY.4.2 kala duwanaanshiyahan, laakiin ha u malayn inay masiibo ku noqon doonto UK. Dhammaan waa isku mid, waxay joogtaa heerkeedii ugu sarreeyay tan iyo Luulyo.
Dibadda UK, nooca-hoosaadka ayaa weli ah "nadir dhif ah" iyadoo 2 nooc oo keliya laga helay Maraykanka ilaa hadda.
Maanta, Morocco ayaa horey u xirtay xuduudaheeda UK, taasoo ka dhigaysa waddankii ugu horreeyay ee dib u billaaba xannibaadaha safarka ee daran ee ka dhanka ah Britain.
Bishii Sebtembar ee sannadkan, Wakaaladda Daawooyinka Yurub (EMA) ayaa ku dhawaaqday kala duwanaansho coronavirus loo yaqaan “Mu” kaas oo sababi kara walaac.
Labadii toddobaad ee la soo dhaafay, Boqortooyada Midowday (UK) ayaa soo sheegtay kiisas badan oo cusub oo COVID-2 ah marka loo eego Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga, iyo Spain.